लकडाउन कहिलेसम्म ? | News Madhesh
चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा पारिसकेको छ । लगभग पचास लाख मान्छे संक्रमित भएका छन् भने उनाइस लाख भन्दा बढी निको पनि भएको छन् । यो भाइरस बारे अझै अनुसन्धान जारी नै छ ।
मान्छेमा कसरि सर्छ ? यसका लक्षण के के हुन सक्छ ? यसका दीर्घकालिन असर ? उपचारका उपाय ? भ्याकसिन ? इत्यादि । यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले यो भाइरस वर्षौसम्म रहन सकने र खोप विकासमा वर्षौ लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । लकडाउनलाई नै तत्काल कोरोना विरूद्धको अचुक हथियारको रूपमा विभिन्न देशहरूले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
भौतिक दुरीले नै संक्रमण हुनबाट बचाउने मुख्य माध्यम बनेको छ । तर, हामीसँग निम्न गम्भीर प्रश्न खडा छ ः यस्तो किसिमको लकडाउन कहिलेसम्म जारी राख्ने ? के ‘कोरोना’ तपाई हामीले सोंचे जस्तै छिट्टै अन्त्य होला ? के कोरोना विरूद्धको खोप तुरून्तै सम्भव छ ? वर्षौ लाग्छ ! के हामीले भारत वा अन्य देशबाट नेपालीलाई आउन रोक्न सक्छौं ? भारत तथा अन्य देशबाट ७०५ उपभोगय वस्तु नेपालमा आयत हुँदै गर्दा हामी कति सुरक्षित छौं ? नेपाली नागरिकलाई विदेशीले विना काम राख्ला ? यदि नेपाल आउन चाहयो भने तपाई हामी रोक्ने को ? कति प्रतिशत घरपरिवार यस्तो लकडाउन धान्न सक्लान् ? खाना विना नागरिक ज्यान गुमाउनु पर्यो भने जिम्मेबार को ? देश नै शारीरिक श्रममा टिकेको छ, यो पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने के हुने ? के अन्य देश जस्तै नेपालको आर्थिक आधारहरू मजबूत छन् र ? कृषकले खेतीबारीको अन्न बेच्न पाएन र अब पुनः अन्न लगाउने अवस्था दयनीय हुँदैछ । मल, बिउको अभाव र आर्थीक संकट । के यस्तै अवस्था राख्ने ? यो समयमा, लगभग ७०० जना भन्दा बढीले आत्महत्या गरिसके ।
कयौं गर्भवती महिलाहरुले उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउन परेको छ । कयौं जनताको सम्पत्ति लिलाम हुँदैछ । कयौंको रोजीरोटी गुम्यो । कयौं जनता पैदल यात्रामै कोशौं हिडेर घर पुग्दा पुग्दै ज्यान गुमाएका छन् । खान नपाएर भोकमरीको सिकार भएका छन् । बजारमा सामान महंगिएका छन् । मानिसहरू शारीरिक र मानसिक रोगी हुँदैछन् । हिजो भर्खर कञ्चनपुर ५ का मलरा सदायको मृत्यु भयो । रोगले होइन, भोकले मर्दैछन् जनता ।
क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर, पानी नपार बांके नैनापुरको युवकले ज्यान गुमाए । कयौं क्वारेण्टाइनमा बसेका महिलाहरु बलात्कृत भएका छन् । विदेशमा कयौं नेपाली अलपत्र परेर रूदै, कराउँदैछन् । एसईई, कक्षा ११, कक्षा १२ लाखौं विद्यार्थी मानसिक तनावमा छन् । तराईका जिल्लाहरुमा लकडाउनको नाममा प्रहरी ज्यादती चरम सिमामा छन् । कतिले पैसा भए पनि खाद्यान्न खरिद गर्न पाएका छैनन् । बैंक तथा मनिट्रान्सफरबाट पैसा झिक्न पाउँदैनन् । यस अवस्थामा के गर्नु उचित होला ? करोडौं जनतालाई भोकमरीको भुमरीमा धकेल्ने ?
स्विटजरल्याण्ड, जर्मनी, डेनमार्क, अष्ट्रेया लगायतका थुप्रै देशले लकडाउन खोली सकेका छन् । भारतमै कति राज्यमा लकडाउन खुकुलो गरिएको छ । तसर्थ, हामीले लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुभन्दा निम्न उपाय अपनाउनुपर्छ र देशलाई तहस नहस हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
१. हरेक वडामा सरकारी वा निजी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा घोषणा गरौं । हाल बाँडिने राहत प्याकेजलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा खर्च गरौं ।
२. क्वारेन्टाइन सेन्टरमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गरौं । साथै, भत्तासहित युवालाई रेखदेख तथा अन्य कार्यका लागि परिचालन गरौं ।
३. परीक्षणको दायरालाई व्यापक गरौं, शसंकित व्यक्तिलाई परीक्षण गरौं, बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखौं ।
४. अति आवश्यक कार्य भौतिक दुरी कायम गरि खुला गरौं । यसका लागि सम्पूर्ण सेना, प्रहरी परिचालन गरौं ।
५.सहज रूपमा खाद्य, मल, बिउ उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था (समाजिक दुरी कायम गरी) गरौं ।
६. किसानको अन्न तथा तरकारी समाजिक दुरी कायम गरि किन्ने र बेच्ने व्यवस्था गरौं ।
७. केहि निश्चित समयका लागि (२–३ घण्टा) समाजिक दुरी कायम गरि आवश्यक पसल खोल्ने व्यवस्था गरौं ।
८. आइएमइ वा बैंक हरेक दिन निश्चित समय खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरौं ।
९. कृषि व्यवसाय वा व्यापारका लागि ऋण बैंकले दिनु पर्ने, मालपोत वा नापी कार्यालय सिर्फ बैंकिङ प्रयोजनका लागि निश्चित समय खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरौं । निमार्ण कार्य समाजिक दुरी कायम गरी गर्ने व्यवस्था गरौं ।
१०. बजारमा स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिऔं । फलफुल निर्यात गर्ने गाडीलाई छुट गरौं ।
कम्तीमा यति भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । कृषक वर्ग र कामदार वर्गलाई राहत हुन्छ । सबैले सहज रूपमा स्थानीय खाद्य वस्तु पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा भारतबाट आउने सामानमा बढी रिक्स छ । जब मान्छे कार्यमा फर्किन्छ तब मात्र आर्थिक स्थितिमा सहजता आउँछ । हाल बाँडिने राहत बाड्नै पर्दैन, त्यसलाई वडाको क्वारेन्टाइनमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । राहत कोषलाई थप स्वास्थयकर्मी तल तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च गर्न सकिन्छ । साथै, हरेक घरबाट केही निश्चित रकम अनिवार्य रूपमा तिर्ने गरि ‘करोना विरूद्धको कोष’ स्थानीय स्तरमै खडा गर्न सकिन्छ ।
तर, यसका लागि लकडाउन खुकुलो गरि दैनिक कार्य गर्न दिनुपर्छ । यदि जेष्ठमा पनि लकडाउन भए बचेको कृषि क्षेत्र पनि ध्वस्त हुनेछ । अझ परनिर्भरता बढ्नेछ । लकडाउन नै अन्तिम उपाय सोच्नु नै गलत हो । कति दिनसम्म लकडाउन ? कति दिनसम्म राहत ? के कोरोना छिट्टै अन्त्य होला ? सम्पूर्ण व्यवसाय तथा कार्य रोकिने हो भने आर्थिक क्षेत्र कहाँ जान्छ ? निजी क्षेत्रको हालत के हुन्छ ? जुन देश श्रममै टिकेको छ, यदि श्रम नै बन्द भयो भने स्थिति के हुन्छ ? तपाईलाई सरकारले खानको लागि कति दिन राहत देला ? राहतको प्याकेज पनि हेरि सकिएकै हो । तसर्थ, अनिश्चित लकडाउनलाई समर्थन नगरौं ।
तपाई हामीले आफै सोचौं, यदि एक वर्षसम्म कोरोना अन्त नभए के वर्ष भरी नै लकडाउन गर्ने ? अनि तपाईको हालत के होला ? यदि जनताले लकडाउनबाट अजित भई आन्दोलन गर्यो भने त्यसपछिको स्थिति अझै भयावह हुन्छ । तसर्थ, भारत वा अन्य देशले के गर्यो भन्दा पनि हामी के गर्न सक्छौं, त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।
लेखक सुदीपराज कुशवाहा एसओएस क्यापस लहानका संस्थापक तथा निर्देशक हुन् । उनी सामाजिक अभियन्तासमेत हुन् ।